चीन 75 75% रक्सी ईन्स्ट्यान्ट एन्टीबैक्टीरियल स्प्रे ह्यान्ड सेनिटाइजर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | राम्रो
Moisturizing छाला मैत्री श्रृंगार हटाउने पोंछे
W२ घरको सुगन्ध सफा बेबी वाइप्स
हानिकारक कीटाणुहरूको जीवाणुरोधी जीवाणुहरूको% 99% मार्दछ
अनुकूलन ब्रान्ड १ 160० वाइप्स प्रति क्यान्स्टर% 75% अल्कोहो ...
% 75% रक्सी ईन्स्ट्यान्ट एन्टीबैक्टीरियल स्प्रे ह्यान्ड सेनिटाइजर
ह्यान्ड सेनिटाइजर धेरै सामान्य हानिकारक कीटाणु र ब्याक्टेरियाको। 99.9999% लाई हटाउन प्रभावकारी छ। छिटो र सजिलो हात सफाई। कठोर रसायनबाट मुक्त। हात र छालामा ब्याक्टेरिया घटाउन जुन रोग सार्न सक्छ। दोहोरिएको प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको।
* उत्पाद प्यारामिटरहरू
उत्पादन नाम: % 75% रक्सी ईन्स्ट्यान्ट एन्टीबैक्टीरियल स्प्रे ह्यान्ड सेनिटाइजर
मोडेल नम्बर: BTX-002
सक्रिय सामग्री: इथाइल रक्सी% 75%
निष्क्रिय सामग्री: कार्बोमेर, ट्राइथानोलामाइन, ग्लिसरीन, पेग G ग्लाइरेसेल कोकोट, एक्वा
क्षमता: १ O OZ / १० OZ / .5.। OZ / 4. O OZ / २ OZ / १ OZ
विशिष्ट प्रयोग: जीवाणुरोधी, कीटाणुशोधन र सफाई
MOQ: १००००० क्यान
प्रमाणीकरण: एसजीएस, एफडीए, पुग्न
आफ्नो जीवन:2वर्ष
प्याकिंग विवरण: २ can डिब्बा / डिब्बा
OEM र ODM: स्वीकार्नुहोस्
भुक्तानी अवधि: L / C,D / A,D / P,T / T,वेस्टर्न यूनियन
पोर्ट: शंघाई, निing्गो
* उत्पाद विवरण
पानी बिना जहाँसुकै प्रयोग गर्नुहोस् Moisturuzers थपियो दोस्रो सेकेन्ड भित्र हावा सूख्दछ
* प्रयोगको लागि उत्तम
राम्रोसँग हातहरूमा उत्पादनहरू फैलाउनुहोस् र सुकाउन दिनुहोस्, पुछ्नुहोस्। Under बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरुका लागि वयस्क पर्यवेक्षणको साथ मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। शिशुहरूसँग प्रयोगको लागि सिफारिश गरिदैन।
छालामा ब्याक्टेरिया घटाउँछ जुन रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
दोहोरिएको प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको।
बाहिरी प्रयोग मात्र हातमा।
ज्वलनशील, आगो वा आगोबाट टाढा राख्नुहोस्।
* यो उत्पादन प्रयोग गर्दा
आँखाबाट टाढा राख्नुहोस्, आँखाहरूसँग सम्पर्कको मामलामा पानीले राम्ररी फ्लश गर्नुहोस् - इनजेज वा इनहेल नगर्नुहोस्। भाँचिएको छालाको साथ सम्पर्क बेवास्ता गर्नुहोस्।
प्रयोग गर्न रोक्नुहोस् र डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि यदि रातो र जलनको विकास हुन्छ वा यदि अवस्था hours२ घण्टा भन्दा बढी रहन्छ भने।
यदि निगलियो भने, मेडिकल मद्दत लिनुहोस् वा तुरून्त नियन्त्रण केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
१० 105 एफ (.6०.''C) माथिको भण्डार नगर्नुहोस्।
केहि कपडा बेदाग हुन सक्छ।
प्लास्टिकको लागि हानिकारक wood काठ समाप्त।
अर्को: KN95 सुरक्षात्मक मास्क
% 75% रक्सी इन्स्ट्यान्ट जीवाणुरोधी जेल हात सानी ...